Kala Wareejinta 14-ka Ee Hoggaanka Talladda dalka; Jeegaantu’se Maxay ku Wareejin Jeegaanta. | Baligubadlemedia.com
Kala Wareejinta 14-ka Ee Hoggaanka Talladda dalka; Jeegaantu’se Maxay ku Wareejin Jeegaanta.
December 12, 2017 - Written by admin
Khamiista Todobaadka, kuna began 14-ka bisha December 2017-ka oo ah Maalinta loo asteeyey xil-wareejinta labada Madaxweyne Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo xilka ka degaya iyo Muuse Biixi Cabdi oo noqon doonaa Madaxweynaha shanta sanno soo socda ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Maha dhacdadani midii u horeysay ee Somaliland soo martaa, hase-yeeshee waa meertadii saddexaad ee loo qabto madaxweyne xilka ka degaya iyo sidoo kale Madaxweyne xilka loo caleemo-saarayo. Sidaa awgeed markaa taa laga yimaado, waxa xusid mudan farqiga kala duwanaanshaha xaaladaha iyo duruufaha ee ay ku kala suntan yihiin, kuwasoo marka la is-barbar dhigo isku ah Kaaf iyo kala dheeri.
Tusaale-ahaan tallaabooyinka ugu mudan ee ilaa iyo hadda dhacay, kana mid ah hab-dhaqanka ugubka ah, waxa kamid ah magacaabista iyo qaabka lagu soo xulay guddida qaban-qaabada xil-wareejinta, taasoo sida lagu baahiyey War-saxaafadeed kob-ku-siigaale ah, oo u ku saxeexan yahay Madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi, oo isaggu ilaa la dhaariyo sharciyan lahayn awood magacaabis, marka laga reebo xubno farsamo oo weliba ku abtirsada xisbigiisa ama bulshada ra’yidka ah ka kamid ah. Teeda kale, way kasii xag-jirtaa qaynuuniyan marka loo eeggo lahaanshaha awoodaha madaxweynaha la doortay inuu magacaabo ama daraf ka noqdo guddi qaban-qaabo, sababtoo ah hawshaas waxa xaq u leh oo shaqadiisa ay tahay Madaxweynaha xilka ka degaya, isaggaana laga rabbaa inuu magacaabo guddi qaban-qaban-qaabo, oo iyaggu soo diyaariya hab-maamuuska xil-wareejinta.
Muran kuma jiro waajibaadka labada masuul ee ku aadan arrinka guddida qaban-qaabada, hase-ahaatee midda is-weydiinta hada keentay, waxay tahay War-saxaafadeedka Madaxwaynaha la doortay ku magacaabay guddida qaban-qaabada oo ka kooban 9-xubnood, kuwasoo afar kamid ah yihiin wasiiro, halka 5-ta kalena yihiin shaqsiyaad ku cusub bulshada reer Somaliland. Arrinta magacaabista oo ahayd mid si weyn loo hadal hayey markii qoraalku soo baxay kaddib, balse dadka badan kooddu waxay dhacdadaas u ictiqaadeen inay ahayd mid muujinaysaa inuu jiro khilaaf soo kala dhex-galay Madaxweynaha la doortay iyo madaxtooyadda.
Sidaas daraadeed xaalado jira awgood, una baahan in bustaha la saaro awgeed xaal loo arkay in madaxweynaha la doortay isaggu soo magacaabo guddida qaban-qaabada xil wareejinta iyo weliba in xubnaha qabanqabaada noqon doona, iyaggana labada dhinac laga soo kala xulo, taa waxa daliil u ah War-saxaafadeedka Madaxweynaha la doortay, kaasoo uu ku sheegay bilowga qoraalka inay arrinkan heshiis ku yihiin Madaxweynaha xilka ka degaya Axmed Siilaanyo.
Haddaba, Wargeyska Yool kolkii uu dhinacyo badan ka eegay dhacdadaas, sidoo kalena waxka waydiiyey dadka u kuur-gala Siyaasadda, waxa muuqata inuu jiro ismaan-dhaafku saabsan nooca xil-wareejinta waxa lala kala wareegayo, taasoo sida wax u socdeen marka la eego aad moodo xil-wareejinta inay ku hoos jireen arrimo badan oo la shareerayo, kuwasoo aynu ka xusi karno Daynta sida la hadal hayo xaadhkaha goosatay, oo la rabbay in si xirfadeysan loo dhex-raaciyo munaasibada xil-wareejinta. Madaxweynaha la doortay Muuse Biixi dhinaciisa isagguna uu isha ku hayey arrimaha, dabeedna sida war-saxaafadeedkiisa uu ku sheegay markii dambe sida wax u jiraan iyo arrimaha ay ka wada-hadleen Madaxweynaha xilka ka tagaya xaalkaasna halkaa lagu damiyey.
Waxa kaloo kamid ah dhaqanada cusub ee ilaa iyo hadda muuqda dhacay qaabka loo wado agaa
simka xafladda xil-wareejinta, oo sida la sheegay Kaadhadhka Marti qaadka lagu soo sameeyey dalka isu-taga Imaaraadka carabta, taasoo ah iyanna dhacdo ugub ah, in Xaflad ka dhacaysa Hargeysa Waraaqaha marti-qaadka loogu soo sameeyey dalka dibediisa, taasoo marka laga yimaado xadiga dhaqaalaha ku baxay iyo safarka dheer ee loo galay iyo weliba shaqsiyaadka hawshaas loo dhiibay oo ujeedada laga leeyahay ay u muuqato naas-nuujin, wallow xoggaha qaar tibaaxeen in nashqada kaadhadhka xafladda lagu diyaariyey mid kamid ah Madbacadaha Magaaladda Hargeysa ee ay maamulan shaqsiyaad lagu xidhiidhiyo nus-dambeedka Madaxweynaha la doorta. Teeda kale, Kaadhadhka cusub magacyada dadka loogu talo-galay waxa lagaga soo daabacay Dubai, sidaas daraadeed warbaahinta oo qayb ka ah dadka xafladda ka qayb galayaa, ayaa shaki laga qabaa in Warbaahinta qaarkood raga reebi doono ka qaybgalka xafladda, iyaddoo arrinkaa looga jeedo irrimo la xidhiidha takoor iyo kala duwanaansho siyaasadeed oo lagu kala qayb-soocayo Warbaahinta maxaliga ah, waxana ilayo hadda la sheegay in tirade Warbaahinta maxaliga ah iyo kaadhadhku kala badan yihiin.